तौल घटाउँदै हुनुहुन्छ? ख्याल गर्नुहोस::JaljalaKhabar Online Portal from Nepal
तौल घटाउँदै हुनुहुन्छ? ख्याल गर्नुहोस
२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार २१:५७
काठमाडौं । हामी वजन बढी भयो भनेर स्लिम हुन घण्टौँ जिममा पसिना बगाउँछौँ । डाइटिङ गर्दै आफूलाई मीठो लाग्ने खाना पनि बार्छौं, तर यस्तो बानीले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।
बढी सुत्दा वजन बढ्छ भनेर धेरै मानिस कम सुत्छन्, तर शारीरिक तन्दुरुस्ती कायम राख्न कम्तीमा ८ घण्टा सुत्नु अनिवार्य छ । डाइटिङका नाममा खाना नखानु अर्को ठूलो गल्ती हो । यदि तौल घटाउने सोचमा छ भने हरियो सागपात एवं सलादमा जोड दिनुपर्छ ।
अध्ययनअनुसार कम खानाले दैनिक गरिने काममा असहजता उत्पन्न हुन्छ जसले अल्छीपन बढाउँछ ।
वजन घटाउने भूत चढेपछि केही मानिस डाइटिङका नाममा बिहान–बेलुका नास्ता खान छोड्छन् । यस्तो बानीले सीधै पेटमा असर गर्छ । बिहान नास्ता नगरी एकैपटक धेरै खाँदा वजन घट्नुको साटो बढ्न सक्छ ।
वजन घटाउन डाइटिङ गर्नुअघि चिकित्सकको सल्लाह आवश्यक छ । बढी डाइटिङ गर्नुभन्दा पनि सही समयमा सही तरिकाले खानु उपयुक्त हुन्छ ।